‘जानी नजानी’ले दर्शकलाई निराश बनाउँदैन – रोशनी केसी
लेन्सनेपाल २०७५ फागुन ३०
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको व्यापार आशातित छैन । आशा गरिएका चलचित्रले समेत दर्शकको साथ पाएका छैनन् । स्टार भनिएका कलाकार वा स्टार जन्माउने भनिने निर्देशकका चलचित्र नै किन नहुन लगातार रुपमा असफल भइरहेका छन् । यही बिचमा शुक्रबारबाट प्रदर्शन हुने चलचित्र ‘जानी नजानी’ निर्माण टिम भने दर्शकको मन जित्नेमा आशाबादी छ ।
पछिल्लो केही समय यता स्टार भन्दा पनि कन्टेन बिक्न थालेको छ । दर्शकहरुले पनि त्यस्तै चलचित्रलाई रुचाउन थालेका छन् । जानी नजनी लभ स्टोरी चलचित्र हो । यद्यपी यसभित्र खादिलो कन्टेन पनि भएको निर्माता तथा कलाकार रोशनी केसीले बताएकी छिन । लभ स्टोरी चलचित्र भन्दैमा केटा केटीको रोमान्स मात्र नभएर यसमा केही सामाजिक अनि केही राष्ट्रियताका कुरा पनि समावेश भएको उनको भनाई छ । त्यस्ता विषयलाई पनि मनोरञ्जनात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेको रोशनी बताउँछिन ।
यो चलचित्र बनाउनु अघि रोशनीले डा. खाते जस्तो सामाजिक कथाको चलचित्र निर्माण गरेकी थिइन । चलचित्रले सिनेमा हलमा अपेक्षाकृत दर्शक पाउन सकेन । तर, देश विदेशमा निकै च्यारीटी शोहरु भए । जुन माध्यमबाट जतिले चलचित्र हेरे सबैले त्यसलाई रुचाए पनि । दर्शकबाट प्राप्त त्यही उत्साहजनक प्रतिक्रियाले रोशनीलाई निरन्तरताका लागि थप उर्जा मिल्यो । सडक बालकको कथामा निर्माण गरेको चलचित्रबाट समाजका लागि केही गर्न सके है भन्ने आत्मसन्तुष्टि पनि मिल्यो ।
डा. खाते जस्तो सामाजिक कथाको चलचित्र निर्माण गरेर रोशनीले तारिफ बटुलेकै हुन । तर, यसपटक भने उनले मनोरञ्जनात्मक चलचित्र निर्माण गरिन । जति बेला डा. खाते निर्माण भएको थियो त्यो समय उनी रिसर्चमा गर्थिन । लामो समय उनले सडक बालकका सम्बन्धमा रिसर्च गरेपछि चलचित्रको लागि सोही विषय छनौट गरेकी थिइन । तर, यसपटक लभ स्टोरी चलचित्रको लागि उत्कृष्ट कथा भेटियो । लभ स्टोरी कथामा पनि नयाँपन, जसले उनलाई लोभ्यायो । त्यसैले जानी नजानी निर्माण गरिन । निरन्तर चलचित्र अभिनय र निर्माणमै लाग्ने बताएकी रोशनीले यसपछि भने फेरी सामाजिक कथाको चलचित्र बनाउने संकेत समेत गरेकी छिन ।
चलचित्रलाई बसन्त अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन । थुप्रै चलचित्रमा सहायक र मुख्य सहायक निर्देशकका रुपमा काम गरेका बसन्तको कामबाट रोशनी सन्तुष्ट छिन । निर्देशक चलचित्रको क्याप्टेन हो । बसन्तले हरेक दृष्टिबाट चलचित्रलाई उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गरेको उनको भनाई छ । यता अभिनेत्री निरिशा बस्नेतका लागि पनि यो चलचित्र डेव्यु हो । भारतिय टेलिभिजन स्टार प्लसबाट प्रसारण भएको टिभी सिरियल ‘चन्द्र नन्दनी’मा अभिनय गरी सकेकी निरिशा मात्र होइन अर्का कलाकार मनिष श्रेष्ठले पनि उतकृष्ट काम गरेको रोशनीको भनाई छ ।
आफ्नो चलचित्रले दर्शकलाई निराश नबनाउने भन्दै रोशनीले जानी नजानी हेर्नका लागि आग्रह समेत गरेकी छिन ।
यात्रा प्रमोशनका लागि कलेजमा सलिन
प्रदिप र गोबिन्दले गरे अनाथ बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग
फ्लप फिल्मका धनी प्रदिप खड्का
करिश्मालाई सर्वोत्कृष्ट होइन, पास भए पुग्छ
‘ए मेरो हजुर ३’ को दोश्रो गीत ‘परान’ सार्वजनिक
New Releases (Chaitra 8)
Director : Apil Bista
Casts : Najir Hussain, Shilpa Maskey, Laxmi Bardewa, Sarita Giri, Bholaraj Sapkota
Next Releases (Chaitra 15)
Director : Santosh Babu Lohani
Casts : Harihar Adhikari, Cristin Paudel, Rabindra Jha, Pradeep Bastola, Saroj Khanal